Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Tremor လက်တုန်ခြင်း
Mon, Apr 16, 2012 at 3:49 PM
ကျနော့မှာ လက်တုန်တတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ၁၉ နှစ်သားလောက်မှာ စတင်သတိထားမိလာတယ်။ ခုဆိုရင် ကျနော့ အသက်က ၂၉ နှစ်ပါ။ မိဘ ဆွေမျိုးတွေမှာလည်း ဒီလို မရှိပါဘူး။ အရင်ကဘာမှ မဖြစ်သလို အရေးမကြီးသလို နေခဲ့ပေမဲ့ ခုဓါတ်ပုံရိုက်တော့ လက်ကတုန်နေတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်လာတယ်။
လက်၊ လက်ချောင်းနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်နေရာမဆို တုန်တာကို Tremor ခေါ်တယ်။ အသံတုန်တာလဲ ပါတယ်။ အဓိက (၃) မျိုးရှိတယ်။
1. Resting tremor ငြိမ်နေတုံးတုန်တာကို Static tremor လို့ပါခေါ်တယ်။ ငြိမ်တယ်ဆိုတာ ကြွက်သားတွေ မလှုတ်ဘဲနေတာကို ပြောတာပါ။ လှုတ်လိုက်တာနဲ့ မတုန်တော့ဘူး။
2. Intention tremors တမင်တကာတုန်တာကို Kinetic tremors လို့လဲ ခေါ်တယ်။ စိတ်ကနေ တမင် လုပ်စရာ ကိုင်စရာတခုခု လုပ်အပြီးမှာ တွန့်တာမျိုး၊ ခလုပ်နှိပ်သလိုမျိုး၊ တခုခုဆီ ရောက်သွားတတ်တာမျိုး ဖြစ်တယ်။ နားလိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားမယ်။
3. Postural or action tremors အနေအထားအရ တုန်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကို ဆန့်ကျင်ပြီး အနေအထား တခုခုမှာ ခြေဖြစ်ဖြစ် လက်ဖြစ်ဖြစ်ထားရတာ ကြာလာရင် တုန်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ ခွက်တခုခုကိုင်နေရင်း၊ စာရေးနေရင်း၊ မတ်မတ်ရပ်နေရင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ကြီးရင် ပိုဖြစ်တယ်။ စိတ်ဖိအားများနေချိန်၊ ပင်ပန်းနေချိန်၊ ကြောက်စိတ်ဝင်နေချိန်၊ ကော်ဖီ-ဆေးလိပ် သောက်တာ များချိန်တွေမှာ ယာယီ တုန်တတ်တယ်။ အဲလိုမဟုတ်တာမျိုးကို အခြေခံရောဂါ ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးကုသရမယ်။ Essential tremor လို့ခေါ်တာလဲ အဖြစ်မနည်းပါ။ လက်ကို အသုံးမပြုဘဲနေရင် တုန်တာမျိုး။ တခုခုလုပ်တော့မယ် စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ တုန်လာမယ်။ ရောဂါ မဟုတ်ပါ။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မက ရှိတတ်တယ်။
1. Alcohol abuse or withdrawal အရက်စွဲခြင်း နဲ့ အရက်ဖြတ်ခြင်း၊
2. Brain tumor ဦးနှောက် အကျိတ်၊ Brainstem ဦးနှောက်အခြေ နဲ့ Cerebellum (ဆယ်ရီဘယ်လန်) နေရာတွေ ထိခိုက်ခြင်း၊
3. Chronic kidney disease နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊
4. Dystonia နဲ့ Charcot-Marie-Tooth disease မွေးရာပါရောဂါတွေ၊
5. Liver failure အသဲအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊
6. Low blood sugar သွေးထဲ သကြားဓါတ်နည်းနေခြင်း၊
7. Magnesium (မက်ဂနီဆီယမ်) နဲ့ Thiamine ဗီတာမင် ဘီ-၁ နည်းခြင်း
8. Mercury poisoning ပြဒါးအဆိပ်သင့်ခြင်း၊
9. Multiple sclerosis (မာလ်တီပယ်-စကယ်လရိုးဆစ်) ရောဂါ၊
10. Muscle tiredness or weakness ကြွက်သား ပင်ပန်းသွားခြင်း၊
11. Overactive thyroid လည်ပင်းကြီး ဟောမုန်းများရောဂါ၊
12. Parkinson's disease (ပါကင်ဆိုနဇင်) ရောဂါ၊
13. Phenylketonuria (PKU) ကလေးရောဂါ၊
14. Spider bites ပင့်ကူရှပ်ခြင်း၊
15. Stroke (စထုပ်ခ်) ရောဂါ၊
16. Drug-induced tremor ဆေးဝါးတွေကြောင့် တုန်ခြင်း
• Anticonvulsants အတက်ရပ်ဆေးများ Valproic acid (Depakote), Sodium valproate (Depakene) ဆေး၊
• Bronchodilators လေပြွန်ကျယ်ဆေးများ Theophylline and Albuterol ဆေး၊
• Immunosuppressants ခုခံအားဆေးများ Cyclosporine ဆေး၊
• Mood stabilizers စိတ်မူပြောင်းကုသဆေးများ Lithium carbonate ဆေး၊
• Stimulants စိတ်ကျွစေသည့်ဆေး Caffeine (ကေဖင်း)၊
• Psychostimulant drug စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်ဆေးများ Amphetamines ဆေး၊
• Corticosteroids (စတီရွိုက်) ဆေးများ၊
• Antidepressants (SSRI) စိတ်မကျဆေးများ။
Tremor ဆိုတာ Involuntary စိတ်ကနေ ထိန်းမရာတမျိုး ဖြစ်တယ်။ Rhythmic စည်းချက်ကျကျလိုလဲ ဖြစ်နေမယ်။ Muscle contraction and relaxation ကြွက်သားတွေ ညှစ်လိုက်-လျှောလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ To-and-fro movements ရှေ့-နောက် လှုတ်ရှားမှု ဖြစ်နေမယ်။ Oscillation တုန်ခါနေမယ်။ Twitching ဆတ်ဆတ်ခါ နေမယ်။ ခေါင်း၊ လက်-ခြေ၊ မျက်နှာ-မျက်ခုံး တကိ်ုယ်လုံးမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Cerebellar tremor (ဆယ်ရီဘယ်လာ) တုန်ခြင်းဟာ Intention tremor ဖြစ်တယ်။ Cerebellum resulting from stroke (စထုပ်ခ်) ဖြစ်လိုက်လို့ Cerebellum (ဆယ်ရီဘယ်လမ်) ကို ထိခိုက်လို့ ဖြစ်တယ်။ Multiple sclerosis (မာလ်တီပယ်-စကယ်လရိုးဆစ်) ရောဂါကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မွေးရာပါရောဂါ တချို့ကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရက်ကြောင့်လဲ ဖြစ်မယ်။ ဆေးဝါးတချို့ကြောင့်လဲဖြစ်မယ်။ ဦးနှောက်ထဲ ရောဂါရရင် ဖြစ်တဲ့ ဘက်မှာသာ တုန်မယ်။
• Dystonic tremor ဆိုတာ အရွယ်မရွေးဖြစ်တယ်။ အနေအထားတခုခုမှာ ဖြစ်တယ်။ တခါတလေ နားလိုက်ရင် သက်သာတယ်။
• Essential tremor အများဆုံးဖြစ်တယ်။ အဆိုးကြီးမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာ တဖက်တည်းဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဘက်လုံး ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်တုန်တာအဖြစ်များပြီး အသံတုန်တာလဲပါတယ်။ တချို့မှာ လမ်းလျှောက်တာလဲ ခါတိုင်းလို မငြိမ်ဘူး။ အသက်ရလာရင် အဖြစ်နည်းလာတတ်ပေမဲ့ ဖြစ်တာက ဆိုးလာနိုင်တယ်။ စိတ်လှုတ်ရှားတာ၊ စိတ်ဖိအားများတာ၊ ကိုယ်ပူတာ၊ သကြားဓါတ်နည်းတာတွေကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက် ၄ဝ ကျော်မှာ ဖြစ်တာများတယ်။ အမျိုးထဲမျာလဲ ရှိနေတတ်တယ်။
• Orthostatic tremor အမျိုးအစားက တုန်နေတာ မြန်တယ်။ မတ်တတ်ရပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ခြေထောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်လာမယ်။ နာနေတာလဲဖြစ်လို့ အရပ်ခိုင်းလို့မရဘူး။
• Parkinsonian tremor ဦးနှောက်ရောဂါကနေဖြစ်စေတယ်။ နားနေတုံးမှာ တုန်တယ်။
• Physiologic tremor အခြေခံရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နေတာ တခါတလေ မမြင်ရဘူး။ စိတ်လှုတ်ရှားမှုများတာ၊ သကြားဓါတ်နည်းတာ၊ အားကုန်နေတာ၊ လည်ပင်ကြီးဟော်မုန်းနည်းတာ၊ အရက်၊ ဖျားတာတွေကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Hysterical tremor ကလည်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
• Rubral tremor ဆိုတာ နားနေတုံးမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်တယ်။ အနေအထားတခုခုမှာဖြစ်တယ်။
1. Physical exam ရောဂါ မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်း၊
2. Family history မိသားစု ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်မေးခြင်း၊
3. Diagnostic imaging using CT or MRI imaging ရိုက်ခြင်း၊
4. Neurological examination အာရုံကြောစစ်ခြင်း၊
5. Electromyogram ရိုက်ခြင်း။
• ခက်ပါတယ်။ မပျောက်နိုင်တာလဲရှိပါတယ်။
• Medications ဆေးတွေထဲမှာ Symptomatic drug therapy ရောဂါလက္ခဏာကို သာသက်သာစေတယ်။
• Parkinsonian tremor အတွက် L-DOPA and/or Pergolide, Bromocriptine and Ropinirole တွေပေးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး သတိထားရတယ်။
• Essential tremor အတွက် Beta blockers (Propranolol and Nadolol) or Primidone, Anticonvulsant တွေပေးတယ်။
• Cerebellar tremor အတွက် ဆေးမရှိသေးပါ။
• Rubral tremor အတွက် L-DOPA or Anticholinergic drugs ဆေးနဲ့ Surgery ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တယ်။
• Dystonic tremor အတွက် Diazepam, Anticholinergic drugs ပေးတယ်။ Botulinum toxin ထိုးနိုင်တယ်။
• Primary orthostatic tremor အတွက် Diazepam + Primidone တွဲပေးတယ်။
• Enhanced physiologic tremor အမျိုးအစားက ဖြစ်စေတာပြင်ရင် ပျောက်တယ်။ လိုအပ်ရင် Beta blockers ပေးတယ်။
• Essential tremor အတွက် Ethanol ဂအင်စနောလ်) နည်းနည်းပေးတာ သက်သာတယ်။ အနုတ်သဘော ဖြစ်တာကိုလဲ သတိထားရတယ်။
• Physical therapy ကုသနည်းသုံးနိုင်တယ်။
• Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်း တချို့အတွက် ရှိတယ်။ ဥပမာ Thalamotomy နည်း။
• Deep brain stimulation (DBS) လျှပ်စစ်နည်း။
• Biomechanical loading ကုသနည်းလဲရှိတယ်။
• Lifestyle ဘဝပုံစံပြောင်းပါ။ Caffeine (ကေဖင်း) နဲ့ Stimulants စိတ်ကြွစေတာတွေ ရှောင်ပါ။ အရက်-ဆေးလိပ် ဖြတ်ပါ။